Tonga, tsy mahafaly; lasa, tsy mampalahelo… | NewsMada
Tonga, tsy mahafaly; lasa, tsy mampalahelo…
Tsy moramora ny nahatongavana amin’izao fifidianana izao. Anisan’ny fototra sy voalohany amin’izany ny fahatofohan’ny maro amin’ny fitondrana… tsy mahomby. Be loatra ny fahalovana sy ny tsy fanjariana ary ny raharaha tsy mazava. Ndeha hotsiahivina indray? Efa nisy ny fitakian’ny vondrona antoko fifidianana mialoha ny fotoana.
Mampiavaka izao fitondrana izao ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly avo lenta, ny fivarotan-tanindrazana, ny kiantranoantrano, ny raharaham-pirenena ananan-kavana… Saika tsy hitahita sy vitavita ho azy avokoa ireny, efa saika zary hadino aza, angamba, ny sasany amin’ireny amin’izao fiatrehana fifidianana fitanisana zava-bita izao.
Mby aiza, ohatra, ny “Raharaha Antsakabary”, ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”, ny “Raharaha Andriamandavy VII” nitoraham-bato ny Bianco, ny fivarotan-tanindrazana toy ny “Raharaha Soamahamanina”, ny “Raharaha kolikoly” eny amin’ny Anteninimierampirenena, indrindra tamin’ny fampandaniana ny lalàm-pifidianana farany teo.
Manginy fotsiny ny ny “Raharaha baomba nipoaka teny Mahamasina, ny 26 jona 2016”, ny “Raharaha Anjozorobe” mahavoasaringotra ny zanaky ny mpitondra, ny “Raharaha fakana an-keriny tany Toamasina”, ny “Raharaha 21 avrily”… Takon’izay hoe zava-bita avokoa ve ireny fahalovana sy kitoatoan-javatra rehetra ireny amin’izao?
Amin’izao fiatrehana fifidianana izao vao manamarin-tena sy manadio tena… Tsy misy mahavita ny vitany, hono, hatramin’izay: tsy fanarahan-dalàna, fampahantrana vahoaka… ? Mila fitoniana, hono, nefa korontanina avokoa izay mitady hihetsika rehetra. Mila manara-dalàna, hono, nefa toy inona ny tsy firaharahana izany hatramin’izay?
Mbola to teny amin’izay lazainy sy ataony ihany ve amin’izany? Efa hita ny vita, na toy inona fanamarinan-tena. Eo ny vahoaka mahita sy mitsara izay iainany isan’andro vaky. Fotoana izao… Tonga, tsy mahafaly; lasa, tsy mampalahelo. Ny latsaka am-po tsy hamelona, ny imolotra indray no ndeha holelafina… hahitan-doza? Efa nanenenana aza…